उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि उपयोगी यी ६ अभ्यासहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि उपयोगी यी ६ अभ्यासहरु !!
बदलिएको जीवनशैली र गलत खानाका कारण युवाहरुलाई आजकल धेरै रोगहरुको शिकार बनाएको छ। यस्ता दीर्घ रोगहरु अहिले सबै उमेर समूह र सबै अवस्थाका मानिसहरूमा देखिने गरेको छ ।
पहिले, हृदयघात र मधुमेह जस्ता रोगहरु युवावस्थामा धेरै कम हुन्थ्यो। आज युवाहरु पनि ती रोगहरुबाट मुक्त छैनन् ।
२ प्रकारको रक्तचाप हुन्छन् । पहिलो उच्च रक्तचाप र निम्न रक्तचाप । उच्च रक्तचाप मुटु रोगको एक प्रमुख कारण हो। यो समस्या जो कोहीको लागि भारी हुन सक्छ र यसले धेरै हदसम्म हृदयसँग सम्बन्धित समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
धेरै मानिसहरु रक्तचाप नियन्त्रण गर्न ट्याब्लेट लिन्छन् । लामो समयसम्म ट्याब्लेट लिनु शरीरको लागि राम्रो मानिँदैन। निसन्देह, रक्तचाप एक ट्याब्लेट खाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर तपाइँ आफ्नो जीवनको बाँकी समय त्यही ट्याबलेटका कारण समस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ ।
उच्च रक्तचापको समस्या भएकाहरूको लागि केही प्राकृतिक तरिकाहरू छन् । यी विधिहरुमा केही अभ्यास पनि सामेल छन् । व्यायाम उच्च रक्तचापबाट बच्ने मुख्य तरिका हो । एक्सरसाइजले रक्त प्रवाहलाई मात्रै फाइदा नगरी हाम्रो समग्र स्वास्थ्यलाई पनि यसले फाइदा पु¥याउँछ।
रक्तचाप भन्नाले मुटुद्वारा पम्प गरिएको रगत रक्त वाहिकाबाट कति छिटो सार्छ भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ । आनुवंशिकी, वातावरण, जीवनशैली, गलत आहार, धुम्रपान, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव आदि कम वा उच्च रक्तचापको कारण हुन सक्छ।
मोटोपनाको कारण, बोसो शरीरमा मात्र छालाको मुनि जम्मा हुन्छ त्यसैले रक्तचापको समस्या अधिक वजन भएका मानिसहरुमा देखिन्छ।
उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि औषधि खाएर मात्र हुँदैन, जीवनशैली बदल्नु नै सर्वोत्तम हो । अतः केही त्यस्ता प्राकृतिक अभ्यास छन्, जसले उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ ।
तपाईंको धमनी साँघुरो भएको अवस्थालाई उच्च रक्तचाप भनिन्छ। लामो समयसम्म बढेको दबाबले मुटुमा समस्या पनि निम्त्याउँछ। उच्च रक्तचापले रक्त वाहिकाहरु र मस्तिष्क, मुटु, आँखा, र गुर्दे को रूपमा अंगहरु लाई हानि गर्न सक्छ।
कम रक्तचाप हाइपोटेन्सनको एक शर्त हो जसमा रक्त वाहिकामा रगतको चाप घट्छ र रगत एक ढिलो दरमा मुटुमा प्रवाह हुन्छ । जब रगतको प्रवाह कम हुन्छ, पर्याप्त रगत मस्तिष्क, मुटु, आँखा, र गुर्दसम्म पुग्दैन । जसले शरीरमा अनेक समस्या निम्त्याउँछ ।
यो अवस्थामा पनि व्यक्तिमा धेरै शारीरिक समस्याहरु हुन सक्छ। यदि तपाइँ उच्च वा कम रक्तचाप नियन्त्रण गर्नको लागि व्यायाम गर्न चाहनुहुन्छ भने जिम जाने कुनै आवश्यकता छैन। तपाईं एक प्रशिक्षक बिना यी अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
१‍‍‍. तीव्र रूपले हिँड्नु
तीव्र रूपले हिँड्ने विधिबाट पनि रक्तचाप घटाउन मद्दत गर्छ । यो धेरै मानिसहरुमा देखा पर्न सक्छ । तर यो सत्य हो । तीब्र रूपमा हिँड्दा अस्थायी रूपमा रक्तचाप बढ्छ । तर यो समग्र फिटनेसका लागि राम्रो कुरा हो । समग्र फिटनेसले उच्च रक्तचापको सुधारमा मद्दत गर्छ । तर यसका लागि कम वजनको साथमा केही सरल व्यायाम गर्नुपर्छ ।
कार्डियो मुटुको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यायाम हो । किनकि यसले रगतको प्रवाह बढाउँछ । यो कसरतले धेरै क्यालोरी घटाउँछ र मुटुलाई स्वस्थ राख्छ । यदि तपाईंसँग उच्च रक्तचापको समस्या छ भने धिमा गतिमा कार्डियो व्यायाम गर्नुपर्छ । जस्तै नृत्य, डोरी नागी खेल, पौडी, साइकलिङ आदि । यो व्यायामले तपाईंको रक्तचाप स्वाभाविक रूपमा कम हुनेछ ।
३ .घरेलु कामहरु
घरेलु कामले तपाईंलाई क्यालोरी खर्च गर्न मद्दत गर्छ । अर्को शब्दमा भन्दा यसले तपाईंलाई दिनभरि सक्रिय राख्न मद्दत गर्छ । यसको लागि तपाईं बागवानी, सफाइ, भाँडामा पानी बोक्ने, बजारबाट सामान ल्याउने आदि काम गर्न सक्नुहुन्छ।
स्ट्रेचिंगले शरीरलाई लचिलो बनाउँछ । जसले शरीरलाई धेरै तरिकाले फाइदा पु¥याउन सक्छ । यो विशेष गरी तपाईंको मांसपेशीको समस्या, चोटको सम्भावनालाई कम गर्नको लागि सहयोगी हुन सक्छ । मांसपेशीलाई तान्नुले रगतको प्रवाहमा पनि सुधार ल्याउँछ । जसले उच्च रक्तप्रवाहमा मद्दत गर्छ। यसबाहेक स्ट्रेचिंगले तनावबाट पनि राहत दिनेछ, तनाव पनि उच्च रक्तचापको कारण हो । (अनलाइनखबर बाट सभार)
हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !! आज साउन महिनाको तेस्रो सोमबार चम्किदैछ यी ८ राशिको भाग्य, तपाईको कुन ?
‘अध्यक्ष होइन,अधिकार चाहिन्छ’ : माधव नेपाल